Thursday August 09, 2018 - 12:12:26 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya Wilaayada Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in xalay iyo maanat ay dagaallo u dhexeeya ciidamada Al-Shabaab iyo kuwa shisheeyaha soo duulay ay ka dheceen qaybo kamid ah Wilaayadaasi.
Weerarka koowaad ayaa xalay Ciidamada Al-Shabaab waxay ku qaadeen fariisin ay ciidamada Yugaandha ee qaybta ka ah waxa loogu yeero AMISOM ku leeyihiin nawaaxiga buundada Qoryooleey.
Dagaalka ayaa socday in mudda ah waxaana ciidamada Al-Shabaab ay saldhiga Yugaandhayska ku garaaceen hub culculus.
iska hor'imaad ayaa saakay mar kale ka qarxay inta u dhaxaysa deennada NO.60 iyo Ceelwareegoow ee isla Wilaayada Shabeellada Hoose kadib markii Ciidamada Al-Shabaab ay wadada u galeen Ciidamo Yugaandhays ah oo halkaas marayay.
Weerarka dhabbagal ah ayaa qabsaday ciidamo lug ah oo kasoo baxay saldhig ay ku leeyihiin deegaanka NO-60 si ay wadada ugu sahminyaan kolonyo gaadiid ciidan ah oo halkaas ku xayirnaa.
Kamiinka ayaa isku badalay dagaal fool ka fool ah waxaana ciidamadii Yugaadhayska ahaa ay dib ugu carareen saldhiggii ay markii hore kasoo ruuqaansadeen ee deegaanka NO-60.
Khasaaraha ciidamada AMISOM kasoo gaaray weeraro xiriir ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka shabeelaha Hoose ayaa sii kordhaya sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoonyahay.
War kasoo baxay taliska ciidamada Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in 7 katirsan ciidamada Yugaandha lagu dilay dagaal ka dhacay duleedka degmada Qoryooleey.
Taliska Melleteriga Al-Shabaab ayaa xaqiijisayay khasaaraha lixaadka leh ee ciidamada ciidamada Yugaandha kasoo gaaray dagaalka " Mujaahidiinta ayaa kamiinno xiriir ah u dhigaykolonyo katirsan ciidamada gaalada AMISOM oo kasoo laabatay deegaanka Gaaywaroow ee duleedka Qoryooleey halkaas oo Ciidamada Afrikaanta iyo kuwa Soomaalida duullaan ku tageen xadgudubyana ka geysteen, markii ay cadowga kasoo ruqaansadeen deegaanka ayaa wadada loogalay waxaana halkaas looga dilay ugu yaraan 7 askari" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al shabaab.
Laba maalin ka hore ayay ahayd markii Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Yugaandha iyo kuwa Soomaalida ah ay weerar ku qadeen deegaanka Gaaywaroow ee duleedka Qoryooleey, halkaas oo ay ka gaysteen dilal, kufsi iyo boob hantiyeed oo ka dhan ah dadkii masaakiinta ah ee deegaankaas ku dhaqnaa.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dhanka ciidamada AMISOM oo ku aaddan khasaaraha loogu geystay deegaanno katirsan Sh/Hoose balse taliska AMISOM loogama baran in uu qirto khasaaraha kasoo gaara dagaallada ka socda dalka Soomaaliya.